आफ्नो अधिकार मागेका थारु साँसद नेतालाई जेल, १७ हजारको ज्यान लिने प्रचण्डलाई के ? महतो « Salleri Khabar
आफ्नो अधिकार मागेका थारु साँसद नेतालाई जेल, १७ हजारको ज्यान लिने प्रचण्डलाई के ? महतो
१६ फागुन, धनगढी । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाको हसुलियामा पहिलो दिनको कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले आफ्नो हक अधिकार माग्दाँ जेल जानु पर्नै देश नेपाल हो ।
१७ हजार नेपाली जनता नरसंहार गराउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जेल नजानु पर्ने तर आफ्नो हकअधिकारका लागि आन्दोलन गरे बापत साँसद रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारुलाई आजीवन सजाय दिने यो कस्तो देश हो । दुई दिने थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको विशेष राष्ट्रिय सम्मेलन कैलालीमा जारी रहेको छ ।
कार्यक्रममा जेलमा रहेका थरुहटका नेता रेशम चौधरी लक्ष्मण थारु लगाएतका मुद्धामा यूवाहरुको ध्यानकर्षण गराईने छ । अहिले रेशम चौधरीका बुवा लालबाबु चौधरी सहितका नेताहरुले सम्बोधन गरेको छन भने कार्यक्रम जारी रहेको छ । एसपी न्युजबाट